"Madaxda Kenya kama hadli karaan howlgalka AMISOM" Midowga Afrika (Sawirro) | Somaale.com
"Madaxda Kenya kama hadli karaan howlgalka AMISOM" Midowga Afrika (Sawirro)
Ururka Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday in Madaxda dalka Kenya aysan ka hadli karin maanta wixii ka dambeeya howlgallada Ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Shir jaraa’id oo maanta si wadajir ah Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho ay ugu qabteen ku xiggeenka Ergayga gaarka ah ee Ururka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Wafula Wamuyiyi, Taliye ku xiggeenka Ciidamada AMISOM iyo Taliyaha Ciidamada lugta ee Ciidamada Uganda Katompo Wamala ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladaha siyaasadda, ammaanka iyo arrimaha bini’aadannimo ee Soomaaliya.
Ku xiggeenka Ergayga gaarka ah ee Ururka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Wafula Wamuyiyi oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka howlgallada Ciidamada Kenya oo ka mid noqday kuwa AMISOM ay ka wadaan deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka, isagoo xusay in howlgallada Ciidamada Kenya xilligaani wixii ka dambeeya ay Maamuli doonaan Taliska AMISOM ee Soomaaliya.
Wafula Wamuyiyi ayaa waxa uu sheegay in Madaxda dalka Kenya aan ka hadli karrin howlgallada Ciidamada Kenya ee Soomaaliya, maadaama si rasmi ah ay Kenya iyo Midowga Afrika u kala saxiixdeen heshiis ku aaddan in Ciidamada Kenya ay ka mid yihiin kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Ku xiggeenka Ergayga gaarka ah ee Ururka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in bishaani dhamaadkeeda Ciidamo boolis ah oo ka socda dalalka Nigeria iyo Uganda ay ka howlgalayaan Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka kuwaasi oo loogu talagalay inay xoojiyaan Ciidamada booliska Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Saraakiisha Ciidamada AMISOM oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay sii xoojinayaan howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya, gaar ahaan xaqiijinta ammaanka deegaannadii dhawaan laga saaray Xarakada Al Shabaab.
Qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho Somalia Qaraxyo caawa laga maqlayo